राजीनामा दिने बढेपछि,अब श्रीमतीलाई साक्षी राखेर मात्र राजीनामा दिन पाइने ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/राजीनामा दिने बढेपछि,अब श्रीमतीलाई साक्षी राखेर मात्र राजीनामा दिन पाइने !
राजीनामा दिने बढेपछि,अब श्रीमतीलाई साक्षी राखेर मात्र राजीनामा दिन पाइने !
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा राजीनामा दिँदा श्रीमतीको सहभागिता अनिवार्य चाहिने नियम लागू गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीले रा’जीनामा दि’नुपूर्व श्रीमतीको स्वी’कृत सहित स्व’यम् श्री’मतीलाई उ’पस्थित गराउनुपर्ने भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले घरपरिवार र श्रीमतीको स’ल्लाह बिना नै रा’जीनामा दिँदा कतिपय प्रहरी कर्मचारीको परिवार नै अलपत्र पर्ने अ’वस्था सिर्जना भएको नि’ष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा दिँदा श्रीमतीको स’हभागिता अनिवार्य गराएको छ। विभिन्न का’रणले हरेक वर्ष प्रहरी कर्मचारीले रा’जीनामा दिने गरेका छन्।
प्रहरी जवान र ह’ल्वदारले स’म्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रा’जीनामा बु’झाउन पाउने प्रा’वधान छ। भने प्रहरी सहायक निरीक्षकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षकले प्रहरी अ’तिरिक्त म’हानिरीक्षलाई रा’जीनामा बु’झाउने प्रचलन छ। प्रहरी निरीक्षकदेखि मा’थिल्लो पदका प्रहरी अधिकारीको रा’जीनामा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्रीले राजीनामा दिँदा श्रीमतीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्विकार्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा गर्न पाउने अधिकार छ, तर घरपरिवारको सहमति र श्रीमतीको उपस्थिति अनिवार्य गराएर मात्र स्वीकृत गर्ने गरेका छौं।’
राजीनामापछि कतिपय प्रहरी कर्मचारीको पारिवारिक अवस्था दयनीय देखिएको बताउँदै उहाँले राजीनामा दिन नपाउने भन्ने नभई श्रीमतीको अनिवार्य उपस्थितिमा मात्र स्वीकृत हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता क्षत्रीले प्रहरीभित्र रा’जीनामा दिनेको संख्या हल्ला गरेजस्तो ठूलो नभएको दाबी गर्नुभयो। राजीनामा दिँदा श्रीमती अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान लागू भएपछि राजीनामा दिने संख्यामा समेत कमी आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
राजीनामापछि अधिकांश प्रहरी कर्मचारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार ७ हजार २ सय २९ प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा प्रहरी हल्वदार र प्रहरी जवानको संख्या ठूलो छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ हजार ५ सय ६४ र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३ हजार ७३ जनाले राजीनामा दिएका थिए। यस आर्थिक वर्षको माघ २० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १ हजार ५ सय ९२ जनाले प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रहरीमा २० वर्षमा सेवा निवृत्त र ३० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान रहेको छ। -नेपाल समाचारपत्र छ।